Jarmalka Oo Lugaha La Galay Dagaalka Ukraine Iyo Ciidamada Ruushka Oo Weerraray Azovsta - #1Araweelo News Network
Jarmalka Oo Lugaha La Galay Dagaalka Ukraine Iyo Ciidamada Ruushka Oo Weerraray Azovsta
Mariupol (ANN)-Ciidamada Ruushka ayaa Salaadadii dib u bilaabay weerrarka warshadda birta ee Azovstal ee magalaadda istiraatiiga ah ee Muripol oo ay ciidamada Ruushku la wareegeen 18 April 2022.
, Hoggaamiyaha mucaaradka ee Jarmalka,Friedrich Merz Image Araweelo News Network, 3 April 2022..
Magaaladda ayaa gacanta u gashay gebi ahaan ciidamada ruushka, marka laga reebo warshadda birta halkaas oo loo malaynayo inay tahay saldhigii ugu dambeeyay ee ciidamada Ukraine ee ku sugan magaalada go’doonsan ee Mariupol.
Dhanka kale dagaalyahanada Ukraine ayaa sheegay in ciidamada Ruushka ay weerar cusub ku qaadeen warshadda birta Azovstal ee sacadadii lasoo dhaafay, kaddib markii dadka rayidka ah laga daadgureeyay goobta.
Magaalada go’doonsan ee Mariupol, waxa is faham koobban oo ruushku ku ogolaaday in dadka deegaanka qaarkood laga saaro. Balse xabad joojintii ayaa burburtay.
Wararka qaar ayaa sheegaya in weli ku dhawaad 200 oo qof oo rayid ah ku go’doonsan yihiin meel dhulka hoostiisa ah oo ka mid ah dhula ay ku fadhido warshadda birta, iyadoo kumanaan kale aannay awooddin inay ka baxaan magaalada.
Maraykanka ayaa ka digaya in Ruushka uu doonayo in uu gabi ahaanba liqo oo isku kala bixiyo dhul ballaadhan oo ku yaalla bariga Ukraine.
Xukuumadda Moscow ayaa hore u muujisay inay rabto gobollada Donetsk iyo Luhansk inay noqdaan jamhuuriyad ka madax bannaan Ukraine, waxayna noqdeen labada gobol kuwa ay Moscow si gaar ah u siinay ahmiyad oo ay gelisay quwad milalteri oo ballaadhan.
Dhinaca kale, Hoggaamiyaha mucaaradka ee Jarmalka ayaa u safray Ukraine Salaasadii si uu ula kulmo Madaxweyne Volodymr Zelenskyy iyo siyaasiyiin kale oo sarsare oo Ukraine ah.
Friedrich Merz ayaa sidoo kale tagay Irpin oo ka baxsan caasimadda Kyiv, taas oo lagu macneeyay in ay ahayd si uu u helo sawirka burburka ay geysteen ciidamada Ruushka, wuxuuna isagoo warbaahinta la hadlay kulanka uu la yeeshay Zelenskyy sheegay in Jarmalku si weyn u taageerayo Ukraine, isla markaana qaadayo tallaabooyin cad cad oo taageero ah.
Hase yeeshee Hoggaamiyaha Jarmalka Chancellor Olaf Scholz ayaa waajahaya dhaleecayn sii kordheysa oo ka dhalatay markii uu diiday inuu booqdo Ukraine, balse booqashada hoggaamiyaha mucaaradka ee Jarmalku ku tegey Ukraine iyo taageerada uu balanqaaday oo ka duwan taageeradii hubka iyo saannada Millateri ee dhowaan Barlin ay u dirtay Ukraine, ayaa muujinaya in Jarmalku lugaha la gelayo dagaalka, taas oo xaaladda gobolka cirka ku shareeray, isla markaana baaxada dagaalka sii ballaadhinay.